म आइतबार एक सैलुन प्राप्त गर्न सक्छन्? लोक omens, सिफारिसहरू
हाम्रा पुर्खाहरूले प्रत्येक मामलामा लागि भनेर विश्वास र घटनाहरू विशेष समय छ। संकेत हदसम्म जीवन निर्धारित। आज, तिनीहरूलाई को एक ठूलो भाग भूल छ, र हामी सम्झेको व्यक्तिहरूलाई, झन् प्रश्न भइरहेका छन्। म आइतबार एक सैलुन र हप्ताको दिन को लागि त्यहाँ कपाल सम्बन्धित केही लोक विश्वास प्राप्त गर्न सक्छन्?
बाल - यो सिर्फ एक सजावट छ ...
बाइबिल संस्करण अनुसार, पहिलो मानिसहरूलाई कुनै बाल थियो। आदम र हव्वाले टाउको को गिरावट अघि, उज्यालो fuzz ढाकिएको थियो जो देखि चमक-जस्तो हेलो आए। यो हल्का परमेश्वर र ब्रह्माण्ड संग बन्धन तर केही थियो। उनको टाउको मा लामो कपाल मात्र पतन पछि देखा पर्नुभयो। तर पनि यस फारममा, हावा संग सम्पर्क कायम गर्न हाम्रो कपाल।
यो संस्करण छैन केवल अर्थोडक्स, तर पनि धेरै अन्य faiths को समर्थन गर्दछ। कपाल धेरै फरक विश्वास र अन्धविश्वासको सम्बन्धित। मानव बाल को धेरै esoteric अभ्यासहरू यसको ऊर्जा को वाहक रूपमा मानिन्छ। अक्सर विभिन्न जादुई संस्कार प्रयोग कपाल। यो आफ्नै tresses विशेष हेरविचार संग उपचार गर्नुपर्छ भन्ने हो। हामी तपाईंलाई आइतबार एक सैलुन प्राप्त गर्न सक्छन् कि बाहिर आंकडा प्रयास गर्नेछ?
थ्रेड को अर्थोडक्स संकेत
मसीही परम्परा मा, सप्ताह विशेष को सातौं दिन। यो आइतबार उपासना बाँकी, राम्रो कामहरू लागि अभिप्रेरित र प्रियजनहरूलाई कुराकानी गर्न छ विश्वास छ। हाम्रा पुर्खाहरूले पाप त्यस दिन काम गर्ने विश्वास गरे। जीवनको आधुनिक गति धर्म परिवर्तन बारे ल्याउँछ। धेरै सप्ताह काम ट्रेडों को प्रतिनिधिहरु, एक अपवाद छ - hairdressers र फैशन स्टाइलिस्ट।
हामी प्रश्न संग पादरी को प्रतिनिधिहरु बारी भने: "म आइतवार अर्थोडक्स मान्छे मा एक सैलुन प्राप्त गर्न सक्दैन" - तपाईं पनि आशिष् प्राप्त हुन सक्छ। एक सैलुन कि प्रदान अन्य दिन सम्भव छैन। पादरीहरूले आइतवार जटिल अवस्थामा र कठिन कामको लागि योजना छैन प्रयास गर्न आफ्नो अनुयायीहरूले सल्लाह।
त्यहाँ अर्को मसीही चिन्ह, केश क्लिपिङ सम्बन्धित छ। केही मानिसहरू संरक्षकको दूत यसको जडान तोड्न को एक उच्च जोखिम रूपमा, आइतबार केश सक्दैन परिवर्तन गर्न भन्ने विश्वास गर्छन्।
बाल आइतबार कटौती - स्मृति र मन काटेर?
के राष्ट्रिय संकेत के: यो आइतबार एक सैलुन प्राप्त गर्न सम्भव छ? Orthodoxy छैन सिफारिस गरिएको छ, तर एक प्रमुख छुट्टी मा कट निषेध गर्दैन। तर लोक omens धर्म, थप कोटिगत सम्बन्धित छैन। केश गर्न पुरातन रूस मा पनि विशेष श्रद्धाको संग उपचार गरिएको छ। यो एक महिला उनको कपाल सार्वजनिक देखा पर्न र टोपी अन्तर्गत लुकाउन अझ राम्रो गर्न बस अनुचित हो भनेर विश्वास थियो। आवश्यक जलेको Sostrizhennye किसिमहरु कहिले काँही त बाल combing बेला खींच-तल गरेका।
हप्ताको सातौं दिन सबैभन्दा उत्सव र आनन्ददायी छलफल गर्न गर्दा। हाम्रो पुर्खाहरूको विश्वास अनुसार, यो आइतबार witches र विजार्डहरू बढ्यो थियो। यो दिन मा, यो कसैले एक गुटदेखि बाहिरको व्यक्ति गर्न अनुमति पनि अधिक त कपाल र नङ काट्नु, र असम्भव थियो। इतिहासकारहरूले रस को बप्तिस्मा पछि, यी परम्परा पनि अर्थोडक्स संग intertwined छन् भन्ने।
"- मन र स्मृति काटेर गर्न आइतबार, केश कट मा।": हसाउने हितोपदेश बच गर्न यसलाई आधुनिक आध्यात्मिकता पनि सप्ताह मा बाल शैली परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको छैन भनेर टिप्पण लायक छ। केही psychics र चिकित्सकहरु अनुसार, हप्ता दिन मानिस, र शुभकामना टाढा गर्न सक्नुहुन्छ मौलिक आफ्नो भाग्य परिवर्तन गर्न सैलुन।
पुरानो हारे लागि मौका
आइतबार सैलुन वा छैन यो मूल्य? सबै राष्ट्रिय र धार्मिक संकेत यस्तो प्रक्रिया नगर्न गर्न सल्लाह छन्। तर वास्तवमा, यो अर्थमा केही गुमाउन भने, प्रयास गर्न बनाउँछ। सप्ताह अन्त मा Mowing मौलिक जीवन परिवर्तन गर्न सक्षम छ। र तपाईं लामो पिरोलिएका असफल छ भने, शायद यो तपाईंको मौका छ। धेरै सकारात्मक संकेत सम्बन्धित केश को परिवर्तन संग कुनै आश्चर्य। आज धेरै मानिसहरू आफ्नो कपाल otstrizhennymi मास्टर को सुझाव जीवनमा समस्या र negativity तिनीहरूलाई छुटकारा दिन्छन् संगै, भन्ने विश्वास गर्छन्। यो "काले ब्यान्ड" बेला hairdresser भ्रमण गर्न धेरै उपयोगी छ भन्ने हो।
जन्मदिन र सैलुन
आधुनिक ज्योतिष को स्टाइलिस्ट लेखेर जब तपाईं जन्मनुभएको कुन दिन सम्झना गर्न सल्लाह। यो तपाईं एक सैलुन आइतबार विशेष व्यक्ति प्राप्त गर्न सक्छन् कि निर्भर गर्दछ। मा हप्ताको सातौं दिन बाल कटौती मंगलवार, बुधवार, बिहीबार र शुक्रबार जन्म लागेकाहरू हुन सक्छ। यो आफ्नो जीवन सन्तुष्ट छन् जो मान्छे को लागि साँचो छ। तपाईं कट्टरपंथी परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने, अन्य दिन हजामको पसलमा साइन अप। आइतबार आफ्नो कपाल कट सम्भव परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूलाई, तिनीहरूले एक सोमवार वा शनिबार जन्म थिए प्रदान। बाहिर कुनै पनि विद्युतीय पात्रो प्रयोग, तपाईं जन्मनुभएको हप्ताको कुन दिन, यो सम्भव छ पत्ता लगाउनुहोस्।
चंद्र पात्रो बाल कतरनी
धेरै आधुनिक महिलाहरु कपाल काटन अघि चंद्र पात्रो हेर्न रुचाउँछु। र यदि "यो सम्भव छ या छैन कि आइतबार Stritch?" प्रश्न गर्न जवाफ थप रहस्यमय चरित्र छ, पृथ्वी जीवन मा चन्द्र चरणहरु को प्रभाव राम्रो विज्ञान द्वारा सिद्ध।
यो चमकदार र रेशमी कपाल प्राप्त गर्न चाहने ती हुनुपर्छ केश परिवर्तन गर्न पूर्ण चन्द्र मा। एक सैलुन र शुक्लपक्ष चन्द्रमा लागि अनुकूल समय। तपाईं यस अवधिमा हजामको भ्रमण भने, कपाल तेजी बढ्नेछ। धेरै ज्योतिष को कृष्णपक्ष चन्द्र एक सैलुन प्राप्त गर्न सिफारिस छैन। तपाईं यो सिफारिस गर्न प्रतिक्रिया खारिज हो भने, यो सम्भव छ, तपाईंको कपाल धेरै बिस्तारै बढ्नेछ।
यसैबीच, यस कृष्णपक्ष चन्द्र मा सैलुन सकेसम्म लामो समयसम्म नयाँ केश को आकार कायम गर्न चाहने ती लागि हुन सक्छ। यो पनि उदाहरण थप आज्ञाकारी बन्न लागि यो बाल, यसको गुण केही परिवर्तन हुन सक्छ भनेर विश्वास छ। तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ र आइतबार एक सैलुन प्राप्त गर्न सक्छन् जब अर्को नियम तपाईं बताउँछ पनि छ। चंद्र पात्रो दिन Hairstyles धेरै प्रतिकूल परिवर्तनहरू छन्। यो तथाकथित शैतानी चन्द्र दिन - 9, 15, 23 र 29 औं चंद्र दिन। तिनीहरूले यो एक सैलुन कुनै सिफारिश छैन प्राप्त।
एक hairdresser छानेर एक विशेष ध्यान रूपमा उपचार गर्नुपर्छ। haircuts समयमा मास्टर ग्राहक को ऊर्जा क्षेत्रहरू संग पारस्परिक। उसोभए, तपाईं सकारात्मक र अनुकूल व्यक्ति काट्नुहोस् भने। त्यहाँ एक चिन्ह हो: "काटन बाल - जीवन परिवर्तन गर्न", र यो अक्सर काम गर्दछ। तपाईं बुद्धि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले भन्दा पुरानो छ जो मास्टर, एक सैलुन लागि साइन अप। मान्छे, आफ्नै युवा विस्तार गर्न चाहने एक स्टाइलिस्ट आफूलाई भन्दा साना भ्रमण गर्न।
यो मास्टर ग्राहक संग नै सेक्स को थियो मनमोहक छ। पुरातन स्वीकार अनुसार, स्टाइलिस्ट-मानिस उहाँले कटौती एक महिला "मार्न" गर्न सक्नुहुन्छ। यो नियम पनि विपरीत अवस्था लागू हुन्छ। को सैलुन पछि आवश्यक तपाईंको आफ्नै अंतर्ज्ञान सुन्न। को नाउ मात्र सकारात्मक भावना कारण भने, सम्पर्क गर्न यो बचत गर्न निश्चित हुन।
त्यहाँ कपाल काट्न सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण साइन छ। कुनै परिस्थितिमा तपाईं आफैलाई कटौती गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया आफ्नो जीवनमा छैन भन्दा सुखद परिवर्तन हुन सक्छ।
shorn ताले के गर्ने?
आजको सौंदर्य सैलून र नाई कट कपाल मा तलामा हालियो थ्रेड, र त्यसपछि सामान्य फोहोर रूपमा हटाइयो। हाम्रा पुर्खाहरूले बाल यस्तो उपचार हेर्न horrified थियो। मा पुरानो दिन यो सबै sostrizhennye र हराएको बाल जलाए गर्न भनेर सोचे थियो। आगो सफाई सहित विभिन्न रहस्यमय गुणहरू, endowed। यो समारोह महत्त्वपूर्ण र किसिमहरु को जलिरहेको पछि खरानी तर केही थियो भन्ने तथ्यलाई थियो। यो कुनै एक जादुई रीतिथितिहरू मा बाल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो।
आज, हामी धेरै sostrizhennye किसिमहरु सङ्कलन गर्न हजामको सोध्न हिचकिचाउनु। तर साइन लागि एक अर्थ छ भने, यो कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्न निश्चित हुन। बाल काटन नियम को आफ्नो सूची बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। एक व्यक्ति तनमनले तिनीहरूलाई विश्वास गर्दा संकेत भन्दा सही पत्ता लगाउन। थ्रेड कट किसिमहरु बेला आत्म-destructs तपाईं मूर्ख विचार लाग्छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई सानो घर मा पार्नसक्छन्। मात्र आवश्यकता - कि बाल पानी हालियो छैन निश्चित गर्नुहोस्। हाम्रा पुर्खाहरूले यो धेरै छ कि विश्वास खराब Omen।
म आधुनिक मानिसहरूलाई आइतबार एक सैलुन प्राप्त गर्न सक्छन्?
कहिले र एक सैलुन कसरी प्राप्त गर्न - यो एक निजी कुरा हो। हामी वैज्ञानिक र प्राविधिक अग्रिम को युगमा बाँचिरहेका छौं, हाम्रो समकालीनहरूको धेरै मानिसहरू इच्छा थाहा र पुरानो परम्परा अस्वीकार छैन। तर पैतृक ज्ञान विश्वास गर्नेहरूलाई छन्। को संकेत तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण हो भने, तिनीहरूलाई टाढा सकेसम्म पालना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। र पनि धर्म वा अन्य विश्वास मामलामा "गलत" केहि गरिरहेको, तपाईं सधैं आफ्नो अर्को कार्य गर्न शुभकामना ल्याउन सक्छ कि सम्झना। तपाईं omens विश्वास छैन भने, तपाईंले कुनै दिन एक सैलुन प्राप्त गर्न सक्छन्। सबै नियमहरू तिनीहरूलाई हुँदा मात्र एक र्शतहीन विश्वास लागू भूल छैन।
को संकेत को वास्तविक समीक्षा कपाल सैलुन सम्बन्धित
त्यो साधारण मान्छे यो आइतबार एक सैलुन प्राप्त गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर बारेमा आज बोल्न? हाम्रो सँगी नागरिक धेरै लोक omens पुरानो पत्नीहरू 'कथा विश्वास गर्छन्। सप्ताह अन्त मा एक सैलुन प्राप्त धेरै सुविधाजनक छ - तपाईं एक सुविधाजनक समयमा पूर्व-दर्ता गर्न सक्छन् र हतार गर्न आवश्यक छैन। साथै, केही रूसी आइतवार लागि - केवल एकपटक तिनीहरूलाई गर्न hairdresser जान मात्र दिन बन्द, र हप्तादिन मा। धेरै मानिसहरूलाई हप्ताको सातौं दिन स्टाइलिस्ट भ्रमण र कुनै पनि समस्या सामना छैन।
तर यो दृश्य मात्र एक विन्दु हो। हाम्रो सँगी नागरिक बीच ती, र ध्यान हजामको पसल प्रत्येक यात्रा योजना गर्नेहरूलाई छन्। तिनीहरूले आइतवार एक सैलुन हुनुपर्छ भन्ने होइन, र उपयुक्त चंद्र दिन चयन गर्न खोज्नु विश्वास गर्छन्। उल्लेखनीय, omens विश्वास गर्ने मान्छे केही साँच्चै शानदार कपाल को घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र परम्परा केही प्रशंसक "सही" सैलुन तिनीहरूलाई मदत थिएन याद।
आइतबार के तपाईं shorn गरेनौं भने?
अक्सर, परम्परागत चिकित्सकहरु र psychics जीवन दीर्घकालीन खराब भाग्य को उजुरी मानिसहरूलाई उपचार। कहिलेकाहीं कालो ब्यान्ड यस्तो सार्दा वा haircuts रूपमा केही परिवर्तन, पछि सुरु हुन्छ। के तपाईं एक आइतबार हजामको भ्रमण गरेपछि तपाईंको व्यापार worsened भने?
सबै को पहिलो, शान्त र sensibly विफलता को संख्या र हदसम्म आकलन प्रयास गर्नुहोस्। संख्या तपाईं रहस्यमय देखिएन भने, यो अवस्था सुधारने आवश्यक छ। यो लागि सजिलो विधि - बाल फेरि, यो समय मा एक शुभ दिन काटे। आफ्नो बाल धेरै छोटो छ भने पनि, तपाईं सधैं तिनीहरूलाई ट्रिम वा मात्र एक धमाका सच्याउन।
दोस्रो कट पछि केही हप्ता प्रतीक्षा गर्नुहोस्। परिवर्तन देखा परेको छ भने, खोजी व्यावसायिक मद्दत। , के भयो कुरा तपाईं मनोवैज्ञानिक गर्न सक्नुहुन्छ, पुजारी वा मानसिक। कहिल्यै कसरी व्यक्तिगत प्रश्न "म आइतबार एक सैलुन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?" बिर्सन्छन्। राष्ट्रिय संकेत को समीक्षा धेरै फरक छन्, र तिनीहरूलाई विश्वास वा छैन - यो केवल तपाईंको आफ्नै व्यवसाय छ!
बब सैलुन र गर्मी 2011 को लागि आफ्नो भेरिएसनहरूमा
गामा बाल straightener: वर्णन, प्रतिक्रिया। संडसी-straighteners
स्टड संग Hairstyles: विवरण र फोटो
प्रकार, आवेदन समीक्षा: बाल "Estel" को लागि तेल। estel व्यावसायिक
Mikrobleyding eyebrows: समीक्षा। नयाँ उपकरण भौं टाटु
Follicle-उत्तेजक हर्मोन। यसलाई उठाएको छ जब आफ्नो आदर्श के हो र?
व्यावसायिक उद्यम को काम को अभिन्न भागको रूपमा उपभोक्ता को कुना
Jellyfish कस्ता प्रकारका? समुद्री र अलवण jellyfish को मुख्य प्रजातिहरू
पराग के हो? पराग गुण
व्यापार - वित्तीय स्वतन्त्रता वा बरु खण्डहर बाटो छ?
Manor Lublin: नक्सामा स्थान, ठेगाना, विवाह दर्ता
वाशिंग मिसिन को मरम्मत
"मित्र" - हाम्रो समयको एक समूह
एक मानिस काठ कसरी ढाल्नु थाह भने - उहाँले नष्ट कहिल्यै!
ठूलो Puppet थियेटर, सेन्ट पीटर्सबर्ग, उल। Nekrasov, 10 प्रदर्शन, समीक्षा
पोलिहेड्रा Name। पोलिहेड्रा Name र उनको गुण को प्रकार